Commission de référence pour les Formations en Médecine (CRFM) (...)
Commission de référence pour les Formations en Médecine (CRFM) et Commission Nationale d’Habilitation (CNH)
Tontosaina ny 15 novambra ka hatramin’ny 19 novambra 2021 izao ny fivorian’ny mpikambana ao anatin’ny Commission de Référence pour les Formations en Médecine (CRFM) sy ny Commission Nationale d’Habilitation (CNH).
Vaomieram-pirenena mpandinika ny antotan-taratasy fangatahana fankatoavana avy amin’ny MESupReS hanokatra fanofanana sy fampianarana miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana.
Fivoriana izay tanterahina eto amin’ny foiben’ny ministeran’ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa eto Fiadanana-Tsimbazaza.
Izao no natao dia mba ahazoana mandinika ireo antotan-taratasy fangatahana avy any amin’ireo Sekoly ambony marobe eto Madagasikara, ahazoana manome alalana azy ireo ahafahany manome tolo-pampianarana sy fanofanana.
Tsy afaka manome tolo-pampianarana na fanofanana ireo Sekoly ambony miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana raha tsy mahazo alalana avy amin’ny ministeran’ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa aorian’ny fankatoavan’ity vaomiera ity.
Misy antotan-taratasy 50 isa eo no ho dinihin’ny CRFM izay mahakasika ny fampiofanana momba ny fahasalamana, Miisa 235 eo kosa ny antotan-taratasy ho dinihan’ny CNH, ary rehefa atambatra ireo dia miisa 285 ireo antontan-taratasy tsy maintsy ho dinihina mandritra ity fivoriana ho an’ny ity tapany faharoa ity.
Misy ireo fepetra maromaro izay tsy maintsy arahina ahazoana manome io fankatoavana io, ary tsy maintsy manaraka ny rafitra LMD izany, ny tanjon’ny ministera dia ny Fampianaranan-dalana sy fampanajana ny rafitra misy.
MESupReS FiadananaMESupReS Fiadanana
1398 visites par jour.